Izay izany angamba, no heverin’izy ireo fa ahazoany tsena, hoy izy. Mety mba hanao IEM kely na Tanamasoandro kely izy. Manana ny maro an’isa ny fitondram-panjakana anefa ka na tsy hitambatra amin’ireo tsy miankina aza dia tsy hanova zavatra loatra. Fombafomba ihany io, hoy izy, ny fahitako azy mba hanaovan’izy ireo dokambarotra ny tenany hoe izaho miaraka aminareo fa mba omeo tsena. Ho an’ny mpanao politika, Zakahely Boniface, kosa dia tsy mety iny fanambaran’ireo depiote tsy miankina iny satria matoa manao fanambarana ny parlemantera dia efa tafatsangana izany izay ny vondrona parlemantera. Tsy mbola nisy anefa izany, hoy izy. Manontany ny vahoaka Malagasy izy raha mahay ny asany ireo olona ireo na tsia. Voaporofo, hoy izy, fa tsy lany ara-dalàna ireo ary matahotra ny tsy hahazo ny tombontsoa ho azon’ny depiote IRD.